Bhuku Rekuongorora: 'Weird Vakadzi' ndeye Inofanirwa-Yeyako yeVateveri veClassic Horror
musha Horror MabhukuFiction Bhuku Rekuongorora: 'Weird Vakadzi' ndeye Inofanirwa-Yeyako yeVateveri veClassic Horror
yakanyorwa na Waylon Jordan August 3, 2020
Vakadzi Vanoshamisira: Classic Supernatural Fiction naGroundbreaking Vanyori Vechikadzi: 1852-1923, hofisi nyowani yechinyorwa chekubiridzira mashura mashura, yabuda muna Nyamavhuvhu 4, 2020 kubva kune vapepeti Lisa Morton uye Leslie S. Klinger. Icho mhedziso inofanirwa-yega kune avo vanofarira vakadzi vakabatsira kugadzira iyo inotyisa mhando.
Iko kuunganidzwa kunopfuura kungopfuura makumi maviri ngano yezvisingazivikanwe uye zvisina kujairika, vamwe kubva kune vanyori vane mazita avo iwe pasina mubvunzo wakanzwa, uye vamwe avo vese asi vakawira mukusaziva kunze kwekuisa kwavo kuiswa mune anthologies uye kuunganidzwa nguva nenguva.
Zvinosuruvarisa, kazhinji ngano senge idzi dzinounganidzwa, roster rinenge rakazara nevanyori vechirume pamwe nekubatanidzwa kwechimwe kana zviviri zvakanyorwa nevakadzi vaive vachinyora panguva imwecheteyo nguva. Nekutenda, Klinger naMorton vakafunga kuti yaive nguva yekurega vakadzi vane tarenda ava vataure.
Weird Vakadzi inotanga naElizabeth Gaskell Nyaya Yemukoti Akare. Yakaburitswa muna 1852, nyaya yacho inotaurirwa neane nanny akwegura ane chekuita neboka revana nyaya inotyisa inosanganisira gogo vake paakanga achiri mucheche. Iyo ingano yakakwana yekumisikidza toni kune izvo iwe zvaunowana mune yasara yeunganidzwa. Iye zvakare muenzaniso wekutanga wekuti nei basa revazhinji vakadzi vanyori venguva yacho rakadzingwa.
Akanga atopinda mukusaziva kare apo Ishe David Cecil - munyori wenhoroondo uye nyanzvi- vakanyora nezvazvo kuti vaive "mukadzi wese" uye kuti vakaita "mbiri yakanaka yekukunda kushomeka kwavo kwepanyama asi zvese pasina." Zvinosuruvarisa, aya marudzi emashoko akatsoropodzwa kushorwa kwebasa rake kweanoda kusvika makumi maviri emakore kusvika vanyori vari muma50s uye makumi matanhatu vatanga kuverenga zvekare Gaskell ndokusvika pakufunga kuti maonero ake anga ari echisimba anotungamira musangano wevakadzi uyo wakatsanangura kuti nei kuwanda kwakazara vanotsoropodza vechirume vekutanga zana ramakore makumi maviri vakasarudza kudzinga basa rake.
Zvino kune vamwe vanyori vakaita saLouisa May Alcott vane mazita aunonyatsoziva, asi ungangodaro usina kuziva kuti vakanyika zvigunwe zvavo mudenga remweya / rinotyisa nguva nenguva. Little Women Zviri pachena kuti ndiro basa rake rinozivikanwa, asi Yakarasika muPiramidhi; kana, Kutuka kwaAmai kubva ku1869 nzvimbo Alcott pamepu yekunyora semumwe wevakadzi vekutanga kunyora yakazara yakazara nhoroondo ye "Mummy's Curse" nhoroondo.
Ndiri kudawo Charlotte Perkins Gilman's Iyo Giant Wistaria. Chero munhu chero upi zvake akatora freshmen level Intro kuLit kosi kukoreji anoziva neyevanyori Iyo Yero Wall Wall-Pepa, asi vashoma vanogona kunge vakaverenga iyi ngano, nyaya yemweya inobata nemamwe madingindira akafanana nebasa rinozivikanwa zviri nani.
Chandinoda zvakanyanya nezve muunganidzwa uyu- uye nezvimwe kuunganidzwa senge izvi - ndipo pandinosumwa kumabasa nevanyori vandisina kumbobvira ndaverenga.
Tora semuenzaniso Iwo Aive Mhumhi rakanyorwa naClemence Housman. Housman aive munyori uye muenzanisi. Iye zvakare anoitika kuve hanzvadzi yemudetembi AE Housman. Iyi ngano inoputira mazhinji emafungiro evaya vakashatirwa nezvinopesana zvevakadzi zvenguva, vachizviputira mune inotyisa, asi isingarambike nyaya yakanaka nezve hadzi mhumhi.
Weird Vakadzi pakupedzisira inoshanda nekuda kwenyaya nevanyori Klinger naMorton vakasarudza. Ivo vanopa muchinjiko-chikamu chevakadzi vakaburitsa panguva iyo nguva, vachitarisana nenyaya dzisina kungonyorwa-zvakanaka chete asi zvakare dziri dzechokwadi dzinokatyamadza. Ivo zvakare vanopa pfupi bio yemunyori wega wega kuti iwe ugone kudzidza zvakawanda pamusoro pevakadzi vanoshamisa mune ino muunganidzwa.
Iri bhuku rinowanikwa kuodha kuAmazon na KUCHADZA PANO. Ini handikwanise kuzvikurudzira zvakakwana kana iwe uri fan of ngano dzeanoshamisa uye asina kujairika.
anthologyBook ReviewLeslie S. KlingerLisa MortonWaylon JordanWeird Vakadzi
John Cusack naHugh Grant Vanenge Vachiridza Lecter mu 'Hannibal'
Sam Neill Anodzoka Pamutemo zve 'Jurassic Park: Dominion'